कमरेड लालसलाम भन्न सिक्नु भो ? : चमिना भट्टराई| Yatra Daily
कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लामो समय बिताउनुभएको विभिन्न क्षेत्रका कमरेडहरू खासगरी अनेमसंघका कमरेडहरू र प्रगतिशील कमरेडहरू आज कोमल ओलीले नैतिक उपदेश दिँदा कस्तो लाग्दो हो ? हिजो तपाईँको अद्भुत कलाबाट ‘श्री ५ महाराजाधिराज’ अल्लादित होइबक्सिनु भए जसरी आज तपार्इंको विचारबाट हाम्रा कमरेडहरू उद्वेलित हुनुभएको त होइन ? त्यसो हो भने ? छिन्ताङ, पिस्कर, माइखोला, सुखानीमा बगेका रगत र त्यहाँबाट बल्लबल्ल नाफाको जीवन पाएका कमरेडहरूले के भन्ने ? त्यसैले फेरी पनि भन्छु कमरेड कोमल ओली अब फेरी गाई छापको मोह छाड्ने र दरबारको पिरती त्याग्ने हो भने आफूलाई रूपान्तरण गर्नुस् साभार : सुर्य अनलाईलबाट